Archive du 20170407
Hentitra ny BIANCO "Tsy hihemotra izahay !"
Nafana ny toe-draharaha teny amin'ny Villa La Piscine omaly. Siotsioka sy kiririoka ny tao ivelany nahitana ireo andian'olona mitaky ny hamoahana an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy.
Mpanolotsain'ny tan�na ao Toamasina Voazara vola, hoy i Elys�e Ratsiraka
Tia vola loatra ! Izay raha fintinina ny fahitan�ny ben�ny tan�nan�i Toamasina Elys�e Ratsiraka ireo mpanolotsain�ny tan�na nanongana ny tenany. Nisy nandray izany niteny tamiko, hoy izy.
Riana Andriamandavy VII Nitarika hetsika tsy nahazoana alalana
Fanaon�ny fanjakana HVM matetika ny fanakanana ny fanehoan-kevitra eto amintsika, ka raha vao misy ny hetsika famoriam-bahoaka ataon�ny vondron�olona na antoko tsy mitovy hevitra amin�ny fitondrana,
Avoko Rakotoarijaona Tsy mankasitraka fanakorontanana
Manamafy hatrany ny Grand Maitre Avoko sy ny mpanao Kung-Fu tarihiny fa tsy mankasitraka ny mety ho fanakorontanana ny firenena indray fa manentana ny olom-pirenena rehetra kosa hanomana sy hiatrika ny fifidianana 2018,
Ben'ny tan�na nivory tetsy amin'ny Colbert Mangataka fihaonana amin'ny filohampirenena
Araka ny efa nampahafantarin�ny filohan�ny fikambanan�ireo ben�ny tan�na an-tan�n-dehibe, Lalao Ravalomanana, dia notontosaina omaly tetsy amin�ny hotely Colbert Antaninarenina ny fihaonana tamin�ireo ben�ny tan�na mpikambana
Taratasin�i Jean Nivadika ny glaoby
Miarahaba anao aho ry Jean a ! Manontany kely ihany aloha, mbola salama tsara ve ianao io ? Tena gaga be ihany aho mantsy naheno ny fanambaranao afak�omaly iny a !
Sendikan'ny mpitsara "Avelao hiasa malalaka ny Bianco sy ny fitsarana"
Tsy niandry ela ny Sendikan�ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM), fa naneho ny heviny mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy, taorian�ny resaka nataon�ny minisitra Charles Andriamiseza,
Hanitra Razafimanantsoa �Mandoto endrika ny firenena ny mpitondra�
Voatohintohina ny fahaleovantenan�ny fitsarana, hoy ny filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena sady solombavambahoaka voafidy tao amin�ny boriborintany voalohany Hanitra Razafimanantsoa araka ny tafa fohy nataony tamin�ny mpanao gazety omaly.
67 HA Tratra Rapapozy mpanendaka
Voasambotry ny polisy avy ao amin�ny boriborintany fahafito etsy 67 Ha i Papozy, 26 taona monina eny Andohatapenaka rehefa avy nanendaka findaina Ramatoa iray teny 67Ha akaikin�ny fiangonana Loterana ny talata lasa teo.
Milisy nahazo fanjakana !
Natao ho an�iza ny lal�na eto amin�ity firenena ity fa ny minisitry ny fitsarana mihitsy no mijoro ho mpisolovava ny olona enjehina noho ny resaka kolikoly,
Fahaketrahana ara-tsaina Ankizy no tena betsaka voany
Aretina iray miafara amin�ny famonoan-tena hatrany amin�ny ankapobeny ny fahaketrahana ara-tsaina (Depression) raha tsy voatsabo.
Tetikasa agri urbaine 90%-n�ny vehivavy sahirana no efa mampihatra azy
Voalohany amin�ireo tan�n-dehibe aty amin�ny oseanina indianina ary faha-9 aty Afrika nanasonia ilay fifanarahana momba ny politika ara-tsakafo na pacte politique alimentaire izay tetikasa iarahana ivontoerana misahana ny asa an-tan�n-dehibe (IMV) ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
FAMINDRAN-TOERANA NY SG SEMPAMA Manazava ny minisitra Paul Rabary
Tsy misy hifandraisany velively tamin�ny fanambarana nataon�ny SEMPAMA tamin�ny volana martsa lasa teo izay nilaza ny tsy fiarahany lalana amin�ny minisiteran�ny fanabeazam-pirenena intsony, hoy ny minisitra Paul Rabary omaly ny famindran-toerana ny sekretera jeneraly Ramanahaka Bodo.